Erdogan oo beeniyey warar laga faafiyey dalkiisa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Erdogan oo beeniyey warar laga faafiyey dalkiisa
Erdogan oo beeniyey warar laga faafiyey dalkiisa
Erodgan ayaa Arbacadii yiri “Waxay leeyihiin Mujaahidiin ka yimid Syria ayaad u dirteen Azerbaijan. Mujaahdiinta waa inay dalkooda ka shaqeeyaan, halkaas ma aadi lahayn.”
Armenia iyo Azerbaijan oo ah laba dal oo horey uga tirsanaa Midowga Soviet ayaa sanado badan waxaa ka dhaxeeya dagaal la xiriira gacan ku haynta gobolka Nagorno-Karabakh, oo ay degan yihiin dad Armenian ah, balse ka tirsan Azerbaijan.
Dagaalkii ugu dambeeyey oo qarxay 27-kii September ayaa weli socda, kadib markii ay fashilantay xabad-joojin la gaaray Sabtidii, oo daqiiqado kooban un dhaqan-gashay.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 15-08-2020
Next articleMaamulka K/Galbeed oo ka hadlay weerarkii Askarta lagu dilay kuna dhawaaqay howlgal